Ikamelo elikhulu e-Collett Park - I-Airbnb
Ikamelo elikhulu e-Collett Park
Itholakala ngaphesheya komgwaqo ukusuka e-Collett Park enhle, futhi ngaphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ku-12 Points, i-Maple Street Park, ne-Union Hospital. Indawo ingaphakathi kwemoto emfushane yezitolo eziningi zokuthengisa nezindawo zokudlela, i-ISU, ne-downtown. Itholakala eduze ne-Highways63 no-41 enikeza ukufinyelela okulula ngaphakathi nokuphuma e-Terre Haute. Ukupaka okungaphandle komgwaqo kwezimoto ezincane, indawo yokupaka yamahhala emgwaqweni yezimoto ezinkulu, indawo ye-patio yangaphandle, ne-WiFi. Izaphulelo ezitholakalayo zokuhlala isikhathi eside, zilungele izisebenzi zezempilo.
Leli ikamelo elikhulu elinendawo yekamelo lokulala, ikhishi/indawo yokudlela, indawo yokuhlala, negumbi lokugezela. Ifulethi lingaphezulu kwegalaji, eliseceleni kwendlu enkulu. Kukhona i-patio yangaphandle. Umbhede omkhulu, umbhede wasemini, kanye nombhede we-futon wezingane. Umatilasi ofuthwa ngomoya ophindwe kabili uyatholakala futhi. Ikhishi alinayo isitofu esivamile/uhhavini, kodwa line-microwave, uhhavini we-convection, ipuleti elinamanzi ashisayo amabili, umshini wokwenza ikhofi, kanye nefriji elikhulu.
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 umbhede wosofa, imibhede yomoya engu- 1, 1 umbhede oyidabuli omncane
Itholakala endaweni enokuthula ngaphesheya komgwaqo ukusuka e-Collett Park
Ngizonikeza izivakashi indawo yazo kodwa ngizotholakala isikhathi esiningi mathupha.